Sida loo Play AVI Files on TV (Samsung TV Mid)
Ma arki kartaa files AVI on your TV via USB? Taasi waxay dhacdaa oo sida caadiga ah, ma aha oo kaliya in aad! File AVI waa qaab aad u adag in la encoded karaa siyaabo kala duwan oo aad TV oo keliya ma awoodi doonaan in la aqoonsado oo dhan oo iyaga ka mid. Waa hagaag, waa adag tahay in la helo codecs xaq iyo rakibo sida. Sidaas, waxaa dhaanta inay tijaabiso sida ugu fudud oo deg deg ah; iyaga encode in aad u baahan tahay wax kasta oo qaab kaliya 3 talaabooyin fudud. Waxaa jira tallaabo-tallaabo ah hanuuniye oo faahfaahsan hoos ka.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa adag oo awood leh Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ). Waxaad halkan kala soo bixi kartaa maxkamadda oo lacag la'aan ah:
Haddii kale, haddii aad leedahay qalabka geeyo sida Chromecast, Roku, Apple TV, Madaxweyne Siilaanyo ama PS3, ama aad TV waa TV a smart, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter inay sii qulquli files AVI in TV (Samsung TV waxaa ka mid ah), iyadoo aan loo eegayn waxa codecs yihiin gudaha files AVI. Taasi waxay ka dhigan tahay uma baahnid inaad u ciyaaro files AVI on TV dhex USB. Ogow in ay tani tahay oo kaliya xal ku haboon madal Windows ah.
Okay ha ugu horeysay ee la arko sida ay u badalaan AVI in TV qaab socon haddii aad weli u isticmaali hab USB ah. Haddaba, waxaan kuu sheegi doonaa sida aad u sii qulquli karaan wax files AVI in TV (TV Samsung ka mid ah) kaliya click ah.
Qeybta 1: Talaabooyinka Easy si loogu badalo AVI in TV qaab socon
Qeybta 2: Stream AVI Galalka La TV (Samsung TV waxaa ka mid ah)
1 Load AVI files si AVI in ay Converter TV
Burcad barnaamijkan, riix Add Files button ama si toos ah jiidi files AVI aad u gal interface ka. ( Talooyin : diinta Dufcaddii waxaa taageera, si loo yareeyo aad diinta iyo waqtiga badbaadin).
Ka dib markii ay soo degida files AVI ah, aad magaca kartaa file, dib-u-diyaarin faylasha laga keeno iyo sidoo kale riixi ku milmaan oo dhan videos galay mid ka mid file haddii loo baahdo.
2 Dooro qaab ku habboon tahay TV
Riix Qaabka Output si ay u doortaan qaab aad doonayso inaad ka. Halkan, waxaad ka heli doontaa tan oo videos, Cajalado iyo qaabab kale oo horena laga heli karaa. Waxaa lagu talinayaa in laba hubi waafaqid ama qaababka ay taageerayaan on your TV hore, maadaama ay tani ku kala duwan yihiin laga yaabo in sida ay brand oo lagu daydo. Si kastaba ha ahaatee, ku MPEG-2, VOB iyo qaab file Dvix guud ahaan taageeray guud TV qaybood oo kala duwan.
3 bilow AVI in diinta TV
Hadda waxaad u timid inaad tallaabadii u dambaysay, oo kaliya ku dhuftay Beddelaan ka furmkidoona AVI in ay diinta ka TV. Marka uu badaley, aad haatan wareejin karaan faylasha ay u wadid aad u adag oo u ciyaari dib aad LCD via HDMI ama cable USB.
Play AVI on talooyin TV:
Haddii aad files asalka waa tayada HD, waxa kale oo aad dooran kartaa MPEG ama TS qaab HD ah. Waxa kale oo aad qabsato karaa koobin in ay si sax ah ay isku mid noqdaan sida aad file isha si loo hubiyo tayada ugu fiican ee loo maqli karo. Si aad u hesho suuqa kala goobta, kaliya riix Settings badhanka midig kor ku xusan loogu badalo button. Intaas waxaa sii dheer, waxa kale oo aad dooran kartaa qaabka wax soo saarka sida 3D MOV, 3D wmv ama MP4 3D qaab 3D category haddii aad rabto.
Haddii aad jeceshahay inaad daawato videos on TV ciyaaryahanka DVD guriga khali kor, waxaad gubi karo files AVI aad u gal disc DVD arrintan Video Converter aad.
Download Free of AVI in ay Converter TV:
Ogow in sida tani waxa keliya oo macquul ah oo ku saabsan madal Windows la Wondershare Video Converter oo aad hubiso in aad heshay qalab geeyo sida Chromecast, Roku ah ama aad qabto TV a smart. Oo sidan, uma baahnid inaad wax laga walwalo waxa codecs yihiin gudaha files AVI iyo sida loo badalo. Waxa kale oo ay u taageeri karaan wax kasta oo ah qaabab kale oo aad u malaynayso karo oo ku saabsan sida MKV, MOV, MP4, wmv, VOB, RMVB iyo wax ka badan.
1 Ka xiran
Marka hore waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad PC iyo TV ama qalab hoorto sida Chromecast shabakad isku mid ah. Oo markii aad ku rakibtay Wondershare Video Converter, ay plugin --_ 1_698_1_ Server Media ayaa sidoo kale lagu rakibi karo oo aad ka heli karto ay toobiye on desktop. Double guji icon toobiye iyo furan Wondershare Media Server. Markaas dooran aqoonsaday qalabka hoorto hoose.
2 dar files AVI in Server Media
Riix Import iyo digsi Scan si aad u hesho files AVI si aad u Server Media. Sidoo kale waxaad eegi your computer si aad u ogaato faylasha xulashada Computer on plugin karo.
3 Stream AVI in TV (Samsung TV waxaa ka mid ah)
Falaarta ku file ah oo guji Play badhanka TV ee ku soo bixi doona. Markaas waxaad ku raaxaysan karaan faylasha AVI on your TV fudud.
Waxaa Fiiri hadda.
> Resource > Video > Sida loo Play AVI Files on TV (Samsung TV Mid)